Muxuu Dastuurka ka qabaa Banaanbaxyada iyo kulamada dadweynaha? – Kalfadhi
Saacadihii ugu dambeeyay baraha Bulshada ku kulmaan ee Internete-ka iyo Warbaahinta waxaa aad looga hadal haayaa warar ku saabsan Banaanbaxyo Dowladda Soomaaliya looga soo horjeedo oo ka dhacaya Xaafada kamid ah magaalada Muqdisho iyo diyaargarow lageliyay Ciidamada amniga, gaar ahaan Booliiska Rabshadaha ka hortaga kuwaas oo loo diyaariyay ka hortagga banaanbaxyada la filayo in ay ka dhacaan Muqdisho.
Sidoo kale Warbaahinta iyo baraha Bulshada ku kulmaan ee Internet-ka waxaa ka bilaawday doodo ku saabsan waxa uu Dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya ka qabo isu soo baxyada iyo kulamada dadweynaha iyadoo ay ka hadleen Siyaasiin iyo Xubno kale oo caan ah.
Dadka ka hadlay waxaa kamid ah Raysal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, Wasiir ku xigeen hore Salaad Cali Jeelle, Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, Sheekh Cali Wajiis, oo dhamaantood ka soo horjeeda Banaanbaxyada iyo C/raxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha Xisbiga Wadajir, Xildhibaan Mahad Salaad iyo mas’uuliyiin kale kuwaas oo soo dhaweeyay Banaanbaxyada ku tilmaamay Xuquuq Dastuuri ah oo ay leeyihiin Shacabka Soomaaliyeed.
C/raxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado in Shacabka Soomaaliyeed laga soo horjeesto Xuquuq Dastuuri ah oo ay leeyihiin taas oo ah in ay soo bandhigaan ra’yigooda iyo tabashada ay qabaan. “Isu soo baxyada, kulamada iyo cabiraadda ra’yiga waa Xuquuq Dastuuri ah mana ahan in dadka loo xumeeyo lagana barbar abaabulo kooxo kale oo ka soo horjeeda” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo warbaahinta la hadlay.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in uu soo dhowaynayo Banaanbaxyada iyo kulamada dadweynaha hadii uu yahay mid nabadeed oo ay ku soo bandhigayaan wixii tabasho ah oo ay qabaan islamarkaana hore ay uga soo dhacaan wadamo badan oo ay Soomaaliya kamid tahay.
“Waa arin mudan in la soo dhaweeyo waana in laga feejignaadaa caburin lagu sameeyo dhalinyarada soo bandhigaya tabashada ay qabaan” ayuu yiri Mr Warsame oo ah hogaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Raysal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo wareysi bixiyay ayaa nasiib darro ku tilmaamay Banaanbaxyada laga abaabulayo degmooyinka magaalada Muqdisho islamarkaana looga soo horjeedo Dowladda Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay.
Raysal Wasaare Geedi ayaa ku micneeyay Banaanbaxyada ka dhacay Muqdisho mid la soo abaabulay oo ay Siyaasiin ka leeyihiin dano gaar ah, sidoo kale waxa uu ku tilmaamay Banaanbax la rabo in lagu dumiyo Dowladda Soomaaliya qalalaasana looga abuuro magaalada Muqdisho.
“Banaanbaxyada waa kuwa la soo abaabulay, waxaa ka dambeeya Siyaasiin iyo shaqsiyaad dano gaar ah ka leh oo raba in la dumiyo Dowladda Soomaaliya” ayuu yiri Raysal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi. “Dadka ra’yigooda waa cabiri karaan laakiin waa in uu ahaadaa mid ay kawarqabto dowladda oo aysan ka muuqan caadifad, iyo dano gaar ah balse waxaa noo muuqata fowdo ay abaabulayaan Siyaasiin dowlad dumis ah” ayuu yiri Cali Maxamed Geedi Raysal Wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Mas’uuliyiin katirsan hey’adda Culumada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale arintaan ka hadlay waxayna ka digeen in Banaabaxyo laga dhigo magaalada Muqdisho iyadoo ay magaalada marti gelineyso dhibaatooyin daran oo dhanka amaanka ah.
“Waan ka digaynaa in banaanbaxyo laga abaabulo Muqdisho ama laga dhigo iyadoo ay jirto xaaladda taagan ee amni xumida ah waana ka warqabnaa in ay abaabulayaan siyaasiin” ayuu yiri Sheekh Cali Wajiis oo katirsan hey’adda Culumada Soomaaliyeed “Xukuumadda iyo madaxda Qaranka waa la hadalnay waana u sheegnay in ay dhago u yeeshaan dhibaatada iyo tabashada Shacabka si lamid ah Shacabkana waxaan uga baaqaynaa in ay ka feejiganaadaan in laga faa’ideesto oo ay siyaasiin dano ku fushadaan” ayuu hadalkiisa raaciyay Sheekh Cali Wajiis oo katirsan Culimada Soomaaliyeed.
Hada Dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya Maxuu ka qabaa Banaanbaxyada iyo kulamada dadweynaha ?
Qodobka 20aad ee Dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya Xorriyadda kulanka,Banaabaxa, Cabashada iyo Codsi-wareedka waxa uuna cadeynayaa in ay dadweynaha dhigaan karaan intaasba oo ay tahay Xuquuq ay leeyihiin Muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qaybgalo kulamo ama Banaanbax si xasilooni ah Cabasho loogu muujinayo iyadoo aan Ogolaansho loo baahneen.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu Cabasho qoraal ah u gudbiyo hey’adaha Dowladda.
Dad badan ayaa ku taliyay in Dowladda Soomaaliya ay u hogaansato Dastuurka islamarkaana ay ilaaliso Sharciga dalka u yaala, maadaama ay Shacabka Soomaaliyeed wajahayaan dhibaatooyin badan oo ay ugu horreyso amni xumo iyo Xasilooni siyaasadeed oo wayn.